पटक पटक प्रधानमन्त्री बनेर ज्योतिषको भविश्यवाणीलाई देउवाले पूरा पो गर्ने हो की ? – Khabar Patrika Np
पटक पटक प्रधानमन्त्री बनेर ज्योतिषको भविश्यवाणीलाई देउवाले पूरा पो गर्ने हो की ?
प्रकाशित मिति: सोमबार, आषाढ २८, २०७८ समय: १९:२६:०६
देउवाका ज्योतिष पक्का
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा चुनावको मुखमा धनगढीमा आयोजित चुनावी कार्यक्रममा बोल्दै आफू पुनः दुई पटक प्रधानमन्त्री बन्ने बताउनुभएको थियो । उहाँले त्यसोभन्दा सबैले खिल्ली उडाएका थिए । सबैभन्दा मजाक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँ निकट नेता तथा कार्यकर्ताले गरेका थिए ।
तर, नभन्दै आज सर्वोच्च अदालतको आदेश पछि उहाँ प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको छ । गाउँका पैतृक ज्योतिषले देउवालाई थप दुई पटक प्रधानमन्त्री बन्ने बताउनुभएको थियो । नेपाली काँग्रेसले निर्वाचनमा पराजय भोगे पनि उहाँ साढे तीन वर्षपछि प्रधानमन्त्री बन्न लाग्नुभएको हो ।
अब देउवा पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ । ज्योतिषले सात पटकको ग्यारेण्टी दिएका छन् । आगामी चुनावी सरकारको नेतृत्व समेत उहाँले नै गर्ने बाटो खुल्दै गएकाले पटक पटक प्रधानमन्त्री बनेर ज्योतिषको भविश्यवाणीलाई देउवाले पूरा पो गर्ने हो की ?